International Women's Day 2018 - We Love Myanmar
Posted on March 8, 2018 March 8, 2018 by We Love Myanmar
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို နှစ်စဉ် မတ်လ ၈ရက်နေ့မှာ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ၁၉၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကနိုင်ငံမှာ စတင်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ထိုစဉ်က အမျိုးသမီးများ အနှီမ်ခံရလေ့ရှိခဲ့ပြီး အမျီုးသမီးများအား မဲပေးခွင့်မပေးခဲ့ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ ရင်ဘောင်တန်းအလုပ်လုပ်ရသော်လည်း လုပ်အားခ တန်းတူမရရှိခြင်း စသည့်အချက်များအပေါ် အမျိုးသမီးများအား တန်းတူဆက်ဆံရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အင်တာဗျုးတစ်ခုမှာ ကျမကို အမေးခံခဲ့ရဖူးသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ လုပ်ငန်းအတွင်း အနှီမ်ခံခဲ့ရပါလား။ အမျိုးသားများနှင့် ခွဲခြားစွာ တန်းတူဆက်ဆံမှု မခံခဲ့ရတဲ့အချိန် ရှိခဲ့ပါသလား၊ လို့ အမေးခံရပါသည်။ ကျမအနေနဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ နှီမ့်ကျစွာ ဆက်ဆံခြင်း မခံခဲ့ရဖူးပါ။ ခွဲခြားစွာ ဆက်ဆံခြင်းလဲ မခံခဲ့ရဖူးပါ။ ခွဲခြားစွာ နှီမ့်ကျစွာ ဆက်ဆံခံခဲ့ရသည်ရှိခဲ့သော် သတိမမူမိခဲ့လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အာရုံမပြုခဲ့မိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုခေတ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နှင့် အလွန်ကွာခြားလွန်းပါသည်။ လူသားလုပ်အား အင်အားဖြင့် အလုပ်မလုပ်ရဘဲ ပညာအရည်အချင်းရှိလာသည့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိူးသားများထက် ထက်မျက်လာသူ များပြားလာပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများအား တန်းတူမညီဆက်ဆံမှုရှိသည်ကို ကျမ မမြင်ပါ။ လမ်းဘေးတစ်လျှောက် ဈေးဆိုင်များကြည့်ပါက အမျိုးသမီးများစွာကို မြင်တွေ့ရပါမည်။ ရုံးတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အလုပ်ကျိုးစားသော အရည်အချင်းရှိသော အမျိုးသမီးတိုင်းကို ဘယ်သူကမျှ ငြင်းပယ်နိုင်မယ် မထင်ပါ။
အလုပ်ကျိုးစားသော ပညာတတ် ပညာရှိသော အမျိုးသမီးကောင်းသည် ခန္ဒာကိုယ်ဗလာကျင်းဖြင့် လမ်းပေါ်လျှောက်ပြီး အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။ အလုပ်ဖြင့်သာ သက်သေပြသွားလေ့ရှိပါသည်။
ကျမရဲ့ သားလေး ၃ နှစ် ခွဲခန့်ကဖြစ်သည်။ မူကြိုကအပြန် ကားပေါ်မှာ ရုတ်တရက် I am so proud of you mommy (မေ့မေ့ကို ဂုဏ်ယူတယ်) လို့ ရုတ်တရက်ကြီး ပြောချလိုက်သည်။ ကျမ မိုးပေါ်ခုန်တက်သွားတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ထိုနေ့ကစပြီး သိသိသာသာ ကျမ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဘာအလုပ်ဘဲလုပ်လုပ် မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိလာခဲ့ပါသည်။ သားလေးက ကျမကို ဂုဏ်ယူနေတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရင် ကြည်နူးနေပါသည်။
ဒီနေ့မှာ ကျမ သတိပေးချင်တာရှိပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့မှာ သင်နဲ့ ပတ်သက်သူ အမျိုးသမီးကို စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ပေးသောအားခြင့် သူမရဲ့ ကောင်းကွက်တခုခုကို ပြောပေးလိုက်ပါလား….
သူမကို ဂုဏ်ယူကြောင်းလဲ ပြောပြလိုက်ပါလား….
မိမိရဲ့မိခင်၊ နှမ၊ ဇနီး၊ ချစ်သူကို အရင်ဂုဏ်ပြုပါ။ ထိုသူတို့ကိုကျော်ပြီး တခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ယောက်ကို အရင် မချီးမွမ်းမိပါစေနဲ့ဦးနော်…
This entry was posted in Myanmar and tagged 2018, I Love Myanmar, International Women's Day, Levi Thang.
544 thoughts on “International Women’s Day 2018”
Dawshwe Dawshwethazin says:
မိုးသည်းည မိုးသည်း says:
မမြင်ရတာကြာပြီ သတိရနေတာ ညီမရေ
Nanthu Zar says:
ုမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတယ် ညီမ။
Saw Yi Mon says:
မြင်ရသူ ရင်ထဲ စိတ်အေးချမ်းတဲ့အလှ
လှလိုက်တာ ဆိုတာထက် ပိုလှတယ်
Phway Bu says:
ရဲထက် ကျော် says:
Chit Fuu Khin says:
Wai Lin Tun Mkn says:
သင်းသင်း မိချော့ says:
မင်္ဂလာပါ ကိုသိန်းဇော် သတိရနေတယ်
ကျ​တော်​ အ​ကောင့်​ ၁လအပိတ်​ခံရလို အခုမှ အမနဲ့​တွေရတာ
ညီမလာကြည့်​ ဒီအမ အရမ်း​တော်​တာ
Mar Mar Aung Kyi
ဟေ မာန် ချမ်း says:
Uthanpe Uthanpe says:
Phyu Lone says:
Thet Thet Khaing says:
Ester Sui Hlawn Do says:
Na mawi tuk
Kin Swan says:
ညီမလေး အတွက် ဂုဏ်ယူလျက်
Mary Wiliam says:
ဖတ်ရတာ အားတက်စေပါတယ် အမကလည်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းကိုလေးစားတယ် ညီမလေးပိုလှလာတယ်
Zayar Moe says:
ချစ်တယ် မမ အတွေးအခေါ်လေးတွေက စနစ်တကျနဲ့ မြင့်တယ် စိတ်ထားလှတယ် မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေ ဆုအတိုင်းပါ
ဘဝ အတိုင်း says:
Cho Cho Maung says:
Daw Nilar Aung says:
မသန်း မော် says:
Ginchan Di says:
Ppuio Jkibko says:
La Min Chitthu says:
အခု ရန်ကုန်မှာ နလန်ထူခါစ
အမအရ မ်း ချစ်
မင်္ဂလာပါ နေကောင်းတယ်နော် မကြီး
အမ ပျောက်နေတယ်ယော နေများမကောင်းလို့လား စိတ်ပူနေတာဗျ အမကျမ်းမာပါစေးးးးး
မမ မတွေ့ တာကြာပီနော် နေကောင်လာ
漲 美凤 says:
အခုလိုပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာပါတယ်ရှင်
မဖတ်လိုက်ရဘူး. စကင်ရိုက်ပို့ပေးပါဦး ကျေးဇူး
ဗိုလ်အောင်ဒင် ပြန်လာပြီ says:
Meme Zan says:
Thank you. Pls let me share.
Pls feel free to share, thank you
စာလေးဖတ်ရတာ အားဖြစ်စေပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ဘဲ သတိရနေတာ လိုင်းပေါ်မတွေ့တာကြာပြီ၊ နေမှကောင်းရဲ့လားလို့လေ၊ အခုနလန်ထဆိုတော့ ကျမထင်တာမှန်နေတာပေါ့၊ ကျန်းမာပါစေနော်။
Sen Nu says:
မတွေ့ ရတာ ကြာပြီ
Mie Mie Khin says:
Nu Hngel says:
วันใหม่ ลูกพ่อเย says:
PH Yo says:
မတွေတာကြာတော့ သတိရနေပါတယ် ကျန်းမာပါစေ
တင့် တင့် says:
မြန်မာ နိင် ငံ အတွက် အားဖြစ်ပါစေ…..
Phyu Chaw says:
Htay Htaywin says:
Aye Lone says:
Takecare . Love you.
ဘုတ် ဘုတ် says:
Khingkhing Win says:
Far Su Win says:
Kyawsoe Thein says:
Shwe Nwe says:
ချစ်မရေ ipad ပြန်တွေ့လား ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ
ဘကြီး မိုး says:
မျက်ခုံးမွေး ခပ်ထူထူလေး ဆွဲလိုက်ရင်
Sabai Bon says:
Than Than Taal says:
Happy women day.zoh thim tlak minu na si.ka lo suangzet ih ka lo uar zet fawn
Shwe Than Yee says:
ဆောင်နှင်း ဖြူ says:
အမ Like မလွှင့်တာကြာပြီနော်
Nilar Thin says:
ကျက်​သ​ရေရှိလိုက်​တာ အမရယ်​ လှလှ
Kyu Kyu Mar says:
Kyi Kyi Lwin says:
Nei Sin says:
ngan tha tuk
Thangmanlun Thangman says:
မိန်းမဆောင်ပြည်ထောင်နိူင်တဲ့သာဓကတွေရှိနေပါတယ် ။တကယ်တော့မိန်းမ တန်ဖိုးကိုလူတွေမသိတာလား သိရက်နဲ့တမင်မသိယောင်ဆောင်တာလား။လောကကြီးမှာမိန်းမတွေသာယာလှပနေတာကိုမသိကြတာနေမှာ။ကျေးဇူးပါ။sis.
Moemoesun Moemoesun says:
စံ ထိပ်ထား says:
မနူးရေ….ပျောက်နေတယ်…..နေကောင်းလား happy interactional day
ChoCho Hla says:
Phyu Phyu Thinn says:
Nwe Oo Phyu says:
Khaingthet Aye says:
အရမ်းနုပျိုနေတာဘဲနော် love u
Chocho Myint says:
Thin Thin Hlaing says:
နင်ပျစ်ထား တဲ့အမိုက် says:
Warr Boe says:
I duh awm em mei
Khin Wai says:
MoeMoe Aung says:
Daw Khin Kyi says:
Daw Nwe Nwe Thein says:
လှလိုက်တာ ချစ်လို့ Live လွှင့်ရင်အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်
Lansanglin Lsl Lsl says:
Myat Hsu Mon says:
မခင် စန်းမြင့် says:
Ashin Sumingala says:
Daw Khin Than Win says:
အရမ်း ကြက်​သ​ရေရှိပြီး ချစ်​ဖို့​ကောင်းတယ်​
Lin Khaing says:
အန်​တီကြီးက လူလှသ​လောက်​စိတ်​လည်​လှတာပဲ ​နော်​
JPa Cung says:
မြင့်မြတ်သော နှလုံးသား says:
Ukyaw Tint says:
Fahniang SanSan says:
Pathian in lo thla suah vevo seh
Daw Ayewin says:
Khinmaungnyo Khinmaungnyo says:
ကိုယ်​၏ကျန်းမာခြင်း စိတ်​၏ချမ်းသားခြင်းနဲ့.အတူ​ဘေးဘယာကင်း​ဝေးပြီး ထာဝရ​ပျော်​ရွှင်​ချမ်း​မြေ့ပါ​စေမမ​လေး
Je Zahkung says:
Wai Wai Than says:
Saya Luzaw says:
Daw Tin Mar Kyu says:
Nat Nat Nwe says:
Sein Giy says:
Nai Ding says:
M Myint Oo says:
ChaCha Het says:
အရမ်းကိုကောင်းလှတဲ့စကားလေးပါ လေးစားပါတယ်မ သားလေးကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပီလဲဟင် သမီးလေးကအကြီးနော်
Kay Khine Oo says:
Na fresh ringring thei ko ee nau! Na cangan mi ka duh tuk
Nant Kay Thi says:
Let Joe says:
ညီမရေ မင်းရဲ့ Live ကို ဒူဘိုင်းကအပြန်ချီကာကိုလေဆိပ်ကနေစ ကြည့်မိပြီ မင်းရဲ့စိတ်ထားကိုလေးစားလု့် ဆက်တိုက်ကြည့်မိတယ် ဒီလိုပကာသနကင်းတဲ့ပရဟိတစိတ်ထားမျိုးထာဝရထားနိုင်ပါစေ မြန်မာနိင်ငံက ဓတ်ရှင်မင်းသမီးတွေနဲ့တော့ အများကြီးကွာပါ့ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ဗ မ သား
Sandar Hnin says:
Aye Aye Nwe says:
Aye Chan Aung says:
မေ သက်ထားအောင် says:
မဂ်လာပါ မမကြီး နေကောင်းပါလား
အန်တီ ကျန်းမာပါစေ မင်္ဂလာပါ အန်တီ
ယုံအော် ယုံအော် says:
Linn Htet Nay says:
Sai Zar Ni says:
Thu Thu Lay says:
Daw Mar Mar Htay says:
မနှင်း ဆီ says:
May Pearl says:
Angae Lay says:
Su Su Lay Lay says:
လေးစားပါတယ် မမ လှနေပါတယ်
Jalawt Lamawng says:
Roi Nu says:
Yoon Nge says:
Eita Aye says:
Thanglin Lin says:
Lahtaw Ahbok says:
Khin Lay Mar says:
Rothla Muana says:
Daw Thida Khaing says:
Right. Good ideas.
Cath Yan says:
Sto Nge says:
အရမ်းကို ကျက်သရေရှိတယ် မမရေ
Tainmin Taimin says:
အရင် ထက် အနည်းငယ်ပိန် သွါးတယ်နေကေါင်းရဲ့လါးသတိရနေပါ တယ်
Daw Ni Ni May says:
နိုင်ငံခြားနေပေမဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ထားလို့ 
Lalthan Siam says:
Ngan tha tuk mawi tuk fawn.
Myatpan Thapye says:
Hmingi Falam says:
Ngan tha tuk aw
Sapte na mawi tuk, na chhuan um tuk aw
May Ni Ni says:
အန်တီ ကြည် says:
Sanpiah Thang says:
Uzoma Ogaraku says:
Mu Mu Myint says:
အရမ်းလှတယ်​ အမ ​နေ​ကောင်းလား
အမရဲ့ အပုံ​လေး မြင်​ရ​တော့ တစ်​ကယ်​ ကျက်​သ​ရေ ရှိပါတယ်​ဗျားး
မမရယ် ခဏလောက် ဆွံအ သွားတယ် သိလား
Levi Sap Nei Thang on Attending internation